moi: October 2017
နေပြည်တော် လေဆိပ်တွင် Hotel ACE ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်းထံမှ မူးယစ်ဆေးဝါး၊ ဆက်သွယ်ရေးစက်၊ လက်နက်ခဲယမ်းနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိ၍ စစ်ဆေး ဖော်ထုတ်မှု အခြေအနေ အသိပေး ထုတ်ပြန်ချက်
၁။ ၁၅-၁၀-၂၀၁၇ ရက်နေ့ ည(၇) နာရီအချိန် နေပြည်တော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ မြန်မာ့အမျိုးသား လေကြောင်းလိုင်း၊ နေပြည်တော်- ရန်ကုန် ခရီးစဉ်အမှတ် UB-142 ဖြင့် လိုက်ပါမည့် ခရီးသည် ဦးဖြိုးကိုကိုတင့်ဆန်း၊ ဦးရဲမင်းဆွေ၊ ဦးဇော်ဝင်းထိုက် တို့နှင့်အတူ ပါရှိသော ခရီးဆောင်အိတ် အတွင်းမှ WY စာတန်းပါ စိတ်ကြွ ရူးသွပ်ဆေးပြား (၁၂)ပြားနှင့် ICE ဟုယူဆရသော (အဖြူရောင်အခဲ) (၁.၅)ဂရမ်၊ ပစ္စတို (၂)လက်နှင့် ကျည်မျိုးစုံ (၇၂)တောင့်၊ National Security Council (US-609) စာတန်းပါ လည်ဆွဲကဒ် (၁)ခု၊ Drone (၁)ခု၊ PHYO KO KO TINT SAN (US-609) အမည်ပါ အထူးနိုင်ငံကူးလက်မှတ် (၁)အုပ်၊ အနက်ရောင် မှန်ဘီလူး (၁)လက်၊ ကင်မရာမျိုးစုံ (၆)လုံး၊ စကားပြောစက် (၃)လုံးနှင့် အခြားဆက်စပ် ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ လေဆိပ်သို့ စီးနင်းလာသည့် YGN 2C-5759 နံပါတ်ပါ အနက်ရောင် HUMMER မော်တော်ယာဉ် (၁)စီးတို့နှင့်အတူ ဖမ်းဆီးရမိခဲ့၍ လယ်ဝေးမြို့နယ်၊ အေလာနယ်မြေရဲစခန်း မယ(ပ) ၃/၂၀၁၇၊ မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကို ပြောင်းလဲစေတတ်သော ဆေးဝါးများ ဥပဒေပုဒ်မ ၁၅/၁၆(ဂ)/ ၂၂(ခ)/ ၂၁ ဖြင့် စတင် အမှုဖွင့် အရေးယူခဲ့ပါသည်။
ကျေးလက်ရေပေးဝေရေးလုပ်ငန်း စက်ရေတွင်းတူးဖော်နေမှုအား ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး
မော်လိုက် အောက်တိုဘာ ၃၁
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မော်လိုက်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးလက်နေပြည်သူများ သန့်ရှင်းသည့် သောက်သုံးရေများ ဖူလုံစွာရရှိနိုင်ရေးအတွက် မြို့နယ်ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာနှစ် ပြည်ထောင်စုရံပုံငွေ ကျပ် (၁၅.၂) သန်းဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဇီးကုန်းအုပ်စု၊ အင်းတပေါင်းကျေးရွာတွင် တူးဖော်လျက်ရှိသော အနက် ပေ (၄၀၀) ရှိ ၄ လက်မ စက်ရေတွင်း တူးဖော်နေခြင်း လုပ်ငန်းများ အချိန်မီပြီးစီးနိုင်ရေး မော်လိုက်ခရိုင် ကျေးလက်ဦးစီးမှူး ဦးအောင်လွင်၊ မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးမှူး ဦးဟန်မင်းဆွေတို့သည် အောက်တိုဘာ ၃၀ ရက်နေ့က ကွင်းဆင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး လိုအပ်သည်များအား မှာကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
မိုးစပါး (၃) မျိုး ယှဉ်​ပြိုင်​စမ်းသပ်​ကွက်​ကွင်း သရုပ်​ပြပွဲနှင့်​​ ဆွေး​နွေးပွဲကျင်းပ
နတ်​​မောက်​ အောက်​တိုဘာ ၃၁
မ​ကွေးတိုင်း​ဒေသကြီး နတ်​​မောက်​မြို့၌ မိုးစပါး(၃)မျိုးယှဉ်​ပြိုင်​စမ်းသပ်​ကွက်​ကွင်း သရုပ်​ပြပွဲနှင့်​​ဆွေး​နွေးပွဲကို​ အောက်တို ဘာ ၃၁ ရက်​နံနက်​ ၁၁ နာရီခွဲအချိန်​က နတ်​​မောက်​မြို့နယ်​ စိုက်​ပျိုး​ရေးဦးစီးဌာန ရုံးဝန်းအတွင်းကွင်းအမှတ်​ ၄၇၆ ကွင်း တွင်​ ကျင်းပခဲ့သည်​။
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMC-S (၁၃)ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကျင်းပ
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMC-S (၁၃) ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေးကို အောက်တိုဘာလ(၃၀)ရက် နေ့လယ်(၁)နာရီက မြိတ်မြို့ ရေပုန်းနယ်မြေ အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက်၊ နတ်စင်လမ်းရှိ JMC-S ရုံးတွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Posted by moi at 1:33 PM No comments:
မြိတ်ခရိုင်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့် မြန်မာမှုဒီဇိုင်း လက်တွေ့ရေးဆွဲနည်း သင်တန်းဆင်း
မြိတ် အောက်တိုဘာ ၃၀
တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မြိတ်မြို့ခရိုင်ပြည်သူ့စာကြည့်တိုက် Community Centre ခန်းမတွင် လူငယ်များ အသက် မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ အလွယ်တကူသင်ယူနိုင်ရေး၊ သင်ကြားပေးသည့်ပညာရပ်များဖြင့် မိမိဘ၀ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း များ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိုင်ရေး၊ လူငယ်များ၏ဘ၀ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်ရွယ်၍ ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ဦးစီးဌာနမှ (၇)ရက်ကြာ ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည့် မြန်မာမှုဒီဇိုင်းလက်တွေ့ရေးဆွဲ နည်းသင်တန်းကို အောက်တိုဘာလ(၃၀)ရက် ညနေ(၆)နာရီက သင်တန်းဆင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
Work for inclusive peace building- Door to peace open to NCA non-signatories: State Counsellor
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi reaffirmed the government’s policy of inclusiveness in the peace-making process, saying the door always opens to ethnic armed groups who have not yet signed the Nationwide Ceasefire Agreement.
The 7th day meeting of 2nd Pyithu Hluttaw 6th regular session was held at 10 am in Pyithu Hluttaw meeting hall Nay Pyi Taw.
At 7th day meeting of 2nd Amyotha Hluttaw 6th regular session held at 10 am yesterday in Nay Pyi Taw, U Kyaw Myo, Deputy Minister for Transport and Communications replied to the question raised by Dr Zaw Lin Htut of constituency 9, Mon State, “Myanma Post and Telecommunication Enterprise has no plan to provide monthly fees for hiring land for the construction of telephone tower pillars at the Gawt Taw Ya village, in Thaton township for the development of rural area as it was built with the permission of Mon State Government.
Posted by moi at 11:15 AM No comments:
State Counsellor receives Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand
State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi receivedadelegation led by Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand H.E Mr. Don Pramudwinai at the receptionist hall of Ministry of Foreign Affairs in Nay Pyi Taw yesterday morning.
Vice President U Myint Swe receivedadelegation led by H.E. Mr. Truong Minh Tuan, Minister for the Ministry of Information and Communications of Viet Nam at the diplomatic hall of the Presidential Palace, Nay Pyi Taw yesterday afternoon.
Efforts stepped up for Kanyinchaung Economic Zone in Maungtaw Township
Kanyinchaung Trade Zone situated in Maungtaw township, Rakhine Stateis being upgraded into Kanyinchaung Economic Zone, by extending more 100 acres from 49.6 acres of original area.
Senior General Min Aung Hlaing receives Thailand Foreign Minister and Indian Commander-in-Chief separately
Senior General Min Aung Hlaing, Commander-in-Chief of Defence Services received H.E. Mr. Don Pramudwinai, Minister of Foreign Affairs of Thailand at Zayarthiri Beikman in Nay Pyi Taw yesterday noon.
Trading and normal living are coming back with crowded with people from both communities as peace and stability gradually regaining in Maungtaw region after the outbreak of the attacks by ARSA extremist terrorists occured on 25 August.
Muslim villagers receive medical care in Maungtaw
Muslim villagers who are gathering at the Ale Thangyaw beach nearby Layyinpyankwin village in Maungtaw township withaview to emigrating into Bangladesh were given medical treatment by Buthidaung mobile medical care unit, on 30 October.
Investment office opens to boost Rakhine’s economy
A ceremony to openaRakhine State Directorate of Investment and Company Administration office and office of the directorate head was held in Rakhine State government office compound in front of the said office yesterday morning.
Group’s second positioner Myanmar to meet Thailand in 2017 AFF Futsal Semifinal
Myanmar just pleased with the second position in the Group A of the 2017 AFF Futsal championship as host Vietnam defeated Myanmar 3-0 in Phu Tho indoor Stadium in Ho Chi Minh City yesterday night.
Entrepreneurs gathered in Maungtaw, Rakhine State, yesterday to explore business opportunities in their attempts to revitalise the border region’s economy, which has stalled since terrorist attacks in late August.
Markets start doing normal business in Maungtaw
Markets in Maungtaw region have started doing business as usual afterabrief closure due to the terrorist attacks occurred on 25 August this year.
UEHRD project continues together with Rakhine Gov’t
“Work has started for the emergence ofacollective force with the participation of all stake holders to implement the UEHRD Programme,” said vice chairman of UEHRD, Dr. Win Myat Aye.
Farm machinery course for peasants of N. Rakhine State
Annual farm machinery operation courses are being held for the convenience of rice harvesting in Maungtaw region the rice bowl of northern Rakhine State.
Two townships in Rakhine State get 24-hour power supply
A 33/11 KV5MVA sub-power station in Rakhine State has been supplying electricity to Myebon and Pauktaw round the clock since the first week of this month even before the ceremonial commissioning of the facility that will be in the early November.
Entrepreneurs seek business opportunities in Maungtaw
“Can we establishatextile factory in Maungtaw Region? We have to think about the production and business development since it’s an economic zone. If we can boost the market then it will simultaneously increase job opportunities.” – U Aung Kyi Soe (General-Secretary of Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry)
Fire destroys four houses, one shop in Maungtaw
A fire broke out in Myo Oo village, north Myoma ward, Maungtaw on 28 October, destroying four houses where no people stayed and one shop.
Shan United crowns MNL Max Cement Cup 2017
Asafinal decisive match of the MNL Max Cement Cup 2017 Championship, Shan United FC played against Hanthawaddy United FC at Taunggyi Stadium yesterday afternoon.
Myanmar secures Semifinal in 2017 AFF Futsal Championship by winning Indonesia
Myanmar played an important game by beating Indonesia 3-2 in Group (A) of the 2017 AFF Futsal Championship in Phu Tho indoor Stadium in Ho Chi Minh City, Vietnam by charming all three win matches in the group possessing full9points and secured the semi-finals with the first position while Vietnam in the second.
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့် ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင် ထိုင်းနိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး၊ စစ်သံရုံး ဝန်ထမ်းများနှင့် တွေ့ဆုံ
ဗန်ကောက်၊ အောက်တိုဘာ ၂၇
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့် ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင်တို့သည် ယနေ့ ဒေသစံတော်ချိန် နံနက် ၁၁ နာရီ ၃၅ မိနစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့ရှိ မြန်မာသံရုံးသို့ ရောက်ရှိပြီး သံအမတ်ကြီး ဦးမျိုးမြင့်သန်း၊ စစ်သံမှူး (ကြည်း၊ရေ၊လေ) ဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်ဇော်၊ မြန်မာသံရုံး ဝန်ထမ်းများ၊ စစ်သံရုံး ဝန်ထမ်းများ မိသားစုဝင်များနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ မြန်မာ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြား
ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီသည် မြန်မာ့စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် များနှင့် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်တွေ့ဆုံပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းချုပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားသည်။
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပ သည်။
Posted by moi at 9:05 AM No comments:
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသား လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန် အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ့ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ အမျိုးသား လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
National verification process to be stepped up in N-Rakhine
Immigration and Population officials in Rakhine State have stepped up the national verification process, which is one of the recommendations of the advisory commission on Rakhine State, recently issuing verification cards to nearly 100 villagers from Shwezar Village tract in Maungtaw Township.
Reconstruction of homes in Maungtaw commences
Villages destroyed in terrorist attacks by the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) are being rebuilt. A stake-driving ceremony was held yesterday to officially start construction of 86 houses in Thittonenargwa village tract.
2nd Amyotha Hluttaw 6th regular session holds its 5th day meeting
At the 5th day meeting of the 6th regular session of the 2nd Amyotha Hluttaw held at 10 am yesterday in Nay Pyi Taw, Mahn Win Khaing Than, Speaker of Amyotha Hluttaw, presentedamotion to contribute the daily-allowances for one day of Amyotha Hluttaw parliamentarians to the Union Enterprise for Humanitarian Assistance, Resettlement and Development in Rakhine (UEHRD), and the Hluttaw announced its approval.
The 2nd Pyithu Hluttaw, 6th regular session’s 5th day meeting was held at 10 am yesterday in the Pyithu Hluttaw meeting hall in Nay Pyi Taw.
President and First Lady attend Thai King’s royal cremation ceremony
U Htin Kyaw, the President of the Republic of the Union of Myanmar, and First Lady attended the cremation ceremony of Thailand’s former king Bhumibol Adulyadej at Sanam Luang public square in Bangkok yesterday evening.
State Counsellor receives Ambassador of the Federal Republic of Germany
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor and Union Minister for Foreign Affairs received H.E. Mrs. Dorothee Janetzke-Wenzel, Ambassador of the Federal Republic of Germany to the Republic of the Union of Myanmar on 26 October 2017 at 10:00 am at the Ministry of Foreign Affairs.
Officials from World Bank, UNRC and EU Commission Meet with Dr Win Myat Aye to Cooperate in UEHRD’s Working Process
Ms. Ellen Goldstein, Director for Myanmar, Cambodia and Lao PDR, Ms. RenataDessallien UN Residential Coordinator and H.E Mr Kristian Schmidt respectively called on Dr Win Myat Aye, Union Minister for Social Welfare, Relief and Resettlement at the May Kha Lar Hall of the Office of the Ministry yesterday morning.
Senior General Min Aung Hlaing meets UN Resident Coordinator
Senior General Min Aung Hlaing received United Nations Resident Coordinator Ms. Renata Nicola Lok Dessallien at Bayint Naung reception hall in Nay Pyi Taw yesterday morning.
Anti- human trafficking action taken in Maungtaw, Rakhine State
Officers and members of an anti- human trafficking unit in Maungtaw Township are performing anti-human trafficking activities in cooperation with respective security forces at the towns’ entrances and express water vehicles ports in Maungtaw and Buthidaung townships.
Consensus reached on half of 21 points proposed by signatories to NCA
With discussion over the 21 points proposed by the signatories to the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA), the meeting on reviewing the NCA between the Union Government and ethnic armed groups ended yesterday in Yangon.
Union Minister receives Literature Conference committee members, UN coordinator
Union Minister for Information Dr Pe Myint received U Aung Soe Oo, Chairman of the Literature Conference 2017 organising committee and party at the guest room of the ministry yesterday.
Veterinary treatment given to abandoned cattle in Maungtaw
Prevention of infectious diseases to cattle was carried out in the surrounding villages of Pantawpyin camp, Maungtaw Township yesterday, according to the Livestock Breeding and Veterinary Department in Rakhine State.
Late goals by Cambodia lead to Myanmar defeat
Inaqualifier of 2018 AFC U19 Championship, Myanmar lost to host Cambodia 2-3 due to last-minute goals from Cambodian strikers at the national Olympic Stadium in Cambodia yesterday.
Good start for Myanmar in 2017 AFF Futsal Championship
In the opening match of the 2017 AFF Futsal Championship, Myanmar earnedabig win over Brunei byascore of 13-0 in Group A competition yesterday, and showed the crowd at Phu Tho Stadium in Ho Chi Minh City,Vietnam that they came to play.
ကုလသမဂ္ဂနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများကို အလေးထားဆောင်ရွက်နေမှုများ ဆွေးနွေး
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂဌာနေ ညှိနှိုင်းရေးမှူး မစ္စ ရီနားတား နီကိုလာလော့ဒ် ဒက်ဆဲလ် လီယန်အား ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားကျင်းပ
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ၏စီစဉ်မှုဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံး၏ "မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောက ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေရန်အတွက် လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်း" အခမ်းအနားကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော် (J) ဆောင်၊ ထမင်းစားခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူ ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများတွင် မြန်မာ့လယ်ယာ သား ငါး ထွက်ကုန်များအတွက် ဈေးကွက်ရရှိနိုင်ရေးဆွေးနွေး
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သူသည် ယနေ့ မွန်းလွဲပိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kristian Schmidt နှင့် အဖွဲ့အား ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့် ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင် ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ် ဘူမိဘော အဒူလျာဒက်ဂ်ျ၏ တော်ဝင်ဈာပန အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးထင်ကျော်နှင့်ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင်တို့သည် ယနေ့ ညနေပိုင်းတွင် ထိုင်းနိုင်ငံ ဗန်ကောက်မြို့ Sanam Luang ၌ ပြုလုပ်သည့် နတ်ရွာစံထိုင်းနိုင်ငံဘုရင်မင်းမြတ် ဘူမိဘော အဒူလျာဒက်ဂ်ျ၏ တော်ဝင်ဈာပနအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မောင်တောမြို့နယ်အတွင်း နိုင်ငံသား စိစစ်ခံရမည့်သူ၏ သက်သေခံကတ်ပြား (NV Card) ထုတ်ပေးရေးနှင့် (National ID) စနစ်အတွက် (Biometric) နည်းဖြင့် မှတ်တမ်း တင်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိ
နေပြည်တော်၊ အောက်တိုဘာလ ၂၆
ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အကြံပြုချက်များအပေါ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များအနက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် နိုင်ငံသား စိစစ်ခံရမည့်သူ၏သက်သေခံကတ်ပြား (NV Card) ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းများအား အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးဆောင်၍ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ ဝန်ထမ်းများက ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေးလျက် ရှိသည်။
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ခံနိုင်မှုစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး သုတေသနစီမံကိန်း ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေး ကော်မတီ၏တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကျင်းပ
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ JST-JICA တို့ပူးပေါင်းပြီး သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ဒဏ်ခံနိုင်မှုစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသုတေသနစီမံကိန်း ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းရေကော်မတီ၏ တတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် (၁၀) နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ Grand Amara ဟိုတယ်၌ ကျင်းပရာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးသိမ်းကြီးတက်ရောက် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားသည်။
UEHRD ၏ လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးအား World Bank ၊ UNRC နှင့် ဥရောပကော်မရှင်တို့က သီးခြားစီလာရောက် တွေ့ဆုံ
လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး အား World Bankမှ Director for Myanmar,Cambodia and Lao PDR, Ms. Ellen Goldsteinကလည်းကောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုလသမဂ္ဂ ဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူး၊ Ms.RenataDessallien ကလည်းကောင်း၊ ဥရောပ ကော်မရှင်မှ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Kristian Schmidt ကလည်းကောင်း ယနေ့နံနက်ပိုင်း တွင် အဆိုပါဝန်ကြီးရုံး မေခလာခန်းမ၌ သီးခြားစီလာရောက်တွေ့ဆုံသည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး စာပေညီလာခံ ၂၀၁၇ ကျင်းပရေး ကော်မတီအဖွဲ့နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ကုသလမဂ္ဂဌာနေညှိနှိုင်းရေးမှူးအား သီးခြားစီတွေ့ဆုံ
နေပြည်တော် အောက်တိုဘာ ၂၆
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဖေမြင့်သည် စာပေညီလာခံ ၂၀၁၇ ကျင်းပရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်စိုးဦးနှင့်အဖွဲ့အား ယနေ့မွန်းလွဲ ၁ နာရီတွင် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံ တွေ့ဆုံသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်သည် FoundationHirondelle ၏ Senior Editorial Mr. Martyn Brown အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ လွှတ်တော်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ ပေါင်းစပ် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ (JCC) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်သည် မြန်မာနိုင်ငံရှိ Foundation Hirondelle ၏ Senior Editorialဖြစ်သူMr. Martyn Brownအား ယနေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဒုတိယ ဥက္ကဋ္ဌရုံး ဧည့်ခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
ကျားမတန်းတူညီမျှရရှိရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသမီးငယ်များအားလုံး စွမ်းပကား တိုးမြှင့်စေရေးနှင့် သက်ဆိုင်သည့် အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီးများ ညီလာခံကျင်းပ
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့နှင့်လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာ ချထားရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်း၍ စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးမှုပန်းတိုင်(၅)ဖြစ်သော ကျားမ တန်းတူညီမျှရေးနှင့် အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသမီး ငယ်များအားလုံး စွမ်းပကား တိုးမြှင့်ရေးနှင့် သက်ဆိုင်သော အဆင့်မြင့်အရာရှိကြီး များညီလာခံ High Level Conference on Gender Equality(SDG-5)ကို နေပြည်တော် MICC-2 ၌ ယနေ့နံနက်တွင် ကျင်းပသည်။
မောင်တောမြို့နယ် သစ်တုံးနားခွဆုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် နေအိမ် ၈၆ လုံး ပြန်လည်တည်ဆောက်ရန် ပန္နက်တင်
မောင်တော အောက်တိုဘာ ၂၆
မောင်တောဒေသတွင် အကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားသည့် တိုင်းရင်းသားကျေးရွာများ ပြန်လည် တည်ဆောက်ရေး ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိရာ သစ်တုံးနားခွဆုံကျေးရွာအုပ်စုတွင် နေအိမ် ၈၆ လုံး တည်ဆောက်ရန် ပန္နက်တင် အခမ်းအနားကို ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ကျင်းပရာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် မန်းဂျော်နီ၊ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ အဖွဲ့ဝင်များ တက်ရောက်ကြသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအထောက်အပံ့ ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးဆောင်ရွက်ရန် အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီ အထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ဆောင်ရွက်ရန် အလှူငွေများပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသား လွှတ်တော်ဧည့် ခန်းမဆောင်၌ ကျင်းပရာ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း တက်ရောက်၍ အလှူငွေများ ပေးအပ်သည်။
Posted by moi at 7:40 PM No comments:
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် အမျိုးသားလွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
Posted by moi at 6:19 PM No comments:
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကျင်းပ
ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဆဋ္ဌမပုံမှန်အစည်းအဝေး ပဉ္စမနေ့ကို ယနေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဝင်းမြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အလှူငွေများ ပေးအပ်လှူဒါန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လူသားချင်းစာနာမှု အကူအညီအထောက်အပံ့ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အလှူငွေ ပေးအပ်လှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနားကို ယနေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆောင်ဧည့်ခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးဝင်းမြင့် တက်ရောက်၍ အလှူငွေများ ပေးအပ်သည်။